Ny Aviation Civile India dia manao fanovana paradigma amin'ny e-Governance
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Ny Aviation Civile India dia manao fanovana paradigma amin'ny e-Governance
Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • Tourism • Travel Wire News
India Civil Aviation nandefa ny e-platform
Ny Minisitry ny Sivily Sivily India Shri Jyotiraditya Scindia dia namoaka androany eGCA - ny sehatra e-Governance ao amin'ny Direction Général de l'Aviation Civile (DGCA).
Ny tetikasa dia mikendry ny automatique ny dingana sy ny asan'ny DGCA.
Nilaza ny Minisitry ny Fiaramanidina Sivily fa ny tetikasa dia midika fiovana paradigma avy amin'ny fitsipika famerana ho amin'ny fiaraha-miasa manorina.
Ny serivisy omena ireo mpandray anjara amin'ny DGCA isan-karazany toy ny mpanamory fiaramanidina, ny fikojakojana fiaramanidina, sns dia azo jerena amin'ny Internet amin'ny eGCA.
Tamin'ny andro hankalazan'i India ny “Azadi Ka Amrit Mahotsav” ho fahatsiarovana ny faha-75 taonan'ny fahaleovantena, Shri Jyotiraditya M. Scindia, Minster Union of Civil Aviation, androany dia nanokana ny eGCA, ny sehatra e-governance Direktorat jeneralin'ny fiaramanidina sivily (DGCA) ho an’ny firenena. Tamin'io fotoana io dia nanatrika ny sekreteran'ny sidina sivily Shri Rajiv Bansal, ny tale jeneralin'ny sidina sivily Shri Arun Kumar, ary ireo mpikambana malaza amin'ny indostrian'ny sidina sivily.
Raha niresaka tamin'io fotoana io i Shri Scindia dia nilaza fa ny fampiharana ny vinan'ny Praiminisitra hajain'ny Digital India, ny DGCA dia nampihatra ny sehatra e-governance eGCA. Ny tetikasa dia mikendry ny automatique ny dingana sy ny asan'ny DGCA, miaraka amin'ny serivisy 99 mandrakotra ny 70% amin'ny asan'ny DGCA izay ampiharina amin'ny dingana voalohany, ary serivisy 198 hodinihina amin'ny dingana hafa. Nilaza izy fa hitondra fiovana goavana ity sehatra fikandrana tokana ity - manafoana ny tsy fahombiazan'ny asa, manamaivana ny fifaneraserana manokana, manatsara ny tatitra ara-dalàna, manatsara ny mangarahara ary mampitombo ny vokatra.
Nidera ny DGCA izy tamin'ny nampidirana ny fiovaovan'ny paradigma avy amin'ny fitsipika tery ho amin'ny fiaraha-miasa manorina. Nambaran’ny minisitra fa vao nanomboka, tsy mbola tapitra ny dia, ary tsy ho ela dia hisy ny jery todika hahafantarana ny tombontsoa azon’ny mpanjifa amin’izao fanovana izao, ary inona no mbola tokony hatao. Shri Scindia dia nilaza fa ny antsika dia governemanta mandray andraikitra, izay, teo ambany fitarihan'i Shri Narendra Modi, dia namadika ny fahasahiranan'ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra ho fotoana iray.
Ny tetikasa dia hanome fototra matanjaka ho an'ny fotodrafitrasa IT sy ny rafitra fanaterana serivisy. Ny e-platform dia manome vahaolana farany amin'ny farany ahitana rindranasa rindrambaiko isan-karazany, fifandraisana amin'ny biraon'ny faritra rehetra, "portal" amin'ny fanaparitahana vaovao ary amin'ny fanomezana serivisy an-tserasera sy haingana ao anaty tontolo azo antoka. Ny tetikasa dia hanatsara ny fahombiazan'ny tolotra isan-karazany omen'ny DGCA ary hiantoka ny mangarahara sy ny fandraisana andraikitra amin'ny asa rehetra ataon'ny DGCA. Ny tetikasa dia nampiharina tamin'ny TCS ho Mpanome tolotra ary PWC ho Mpanolo-tsaina momba ny fitantanana ny tetikasa.
Nandritra ny fanombohana, ny Minisitry ny Sivily Sivily ihany koa dia nanambara tranga iray, "DGCA dia miala amin'ny sidina nomerika", izay mirakitra ny dian'ny DGCA amin'ny fampiharana ny eGCA. Ny fanamby natrehan'ny DGCA sy ny fepetra noraisina hamahana izany amin'ny alàlan'ny sehatra eGCA dia nampidirina tamin'ity fanadihadiana ity.
Efa hita ao amin'ny eGCA an-tserasera ny tolotra omena ireo mpandray anjara ao amin'ny DGCA isan-karazany toy ny mpanamory fiaramanidina, Injeniera Fikojakojana fiaramanidina, Mpanome zotram-piaramanidina an'habakabaka, Opérateur an'habakabaka, Opérateurs Seranam-piaramanidina, Organisation Flying Training, Fikojakojana sy Famolavolana sns. Ireo mpangataka dia afaka mangataka serivisy isan-karazany ary mampakatra ny antontan-taratasiny amin'ny Internet. Ireo fangatahana dia hokarakarain'ny tompon'andraikitra ao amin'ny DGCA, ary ny fankatoavana sy ny fahazoan-dàlana dia havoaka amin'ny Internet. Natomboka ihany koa ny fampiharana finday ho an'ireo mpanamory fiaramanidina sy injeniera momba ny fikojakojana fiaramanidina mba hijerena ny mombamomba azy sy hanavao ny angon-dry zareo eny an-dalana.
Ny hetsika eGCA dia dingana lehibe amin'ny dian'ny fanovana nomerika ataon'ny DGCA ary hanatsara ny traikefan'ireo mpandray anjara aminy. Ho an'ny DGCA, dingana iray mankany amin'ny "mora amin'ny asa aman-draharaha.” Ity fanovana nomerika ity dia hitondra fanampim-panazavana manan-danja amin'ny rafitra mifehy ny fiarovana an'ny DGCA.